Maxaad ka faa'idi kartaa qof aadan aqoon? - BBC News Somali
Maxaad ka faa'idi kartaa qof aadan aqoon?
Inta badan dadka waxay maalin kasta la kulmaan dad aysan garaneynin, gaar ahaan marka ay joogaan goobaha baabuurta laga raaco, goobaha lagu qaxweeyo ama xarumaha laga dukaameysto.
Dadka intooda badan waxay rumeysan yihiin in haddii ay la hadlaan qof aysan aqoon ay dhibaato kala kulmi karaan ama ay wax kale dareemaan, marka qof kasta waxaa uu noqonayaa mid dadka kale iska soocay.
Waa fikrad aan macquul aheyn, balse daraasad aanu sameynay ayaa muujineysa in dadka ay dhayalsadaan fa'iidooyinka laga dhaxli karo in aad la xiriirtid qof aadan garaneyn.
Tusaale ahaan, marka aad shaqo u socotid haddii aad la hadasho qof aadan aqoon waxaad labadiinnuba dareemeysaan farxad, adiga oo markaas filaneysay waxyaabo kale.
Daraasad ay BBC-da ka sameysay goobaha baabuurta laga raaco ee magaalada Chicago ee dalka Mareykanka ayaa waxay muujineysaa in boqolkiiba 40 kamid ah dadkaas ay ku rajo weyn yihiin inay la hadlaan dadka aysan aqoon ee rakaabka ah.
Qof kasta oo ka qeyb qaatay daraasadda ayaa horay isugu dayay inay si farxad leh ay ula sheeeysteen qof aysan aqoon xilli ay baabuur isla saarnaayeen.
Daraasado la sameeyay ayaa lagu ogaaday in dadka rakaabka ah ee sheekada u billaabay dadka aysan gareyn ay si weyn u jecleysteen tallaabadaas.
Dadka intooda badan ma jecelo hadal aan ulajeeddo laheyn balse in yar oo kamid ah ayaa soo dhaweeya hadallada ujeeddada wata marka ay la hadlayaan qof aysan aqoon.
Image caption Dad jooga goob baska laga raaco
Waxay arrintani u horseeddaa qofka inuu ku dhasho dareen dhowr nooc ah oo saameyn ku reebi kara noloshiisa.
La hadalka qof aadan gareyn waxay sababi kartaa in laisku furfurnaado isla markaasna meesha ay ka baxdo aamuusnaanta iyo kalinimada.
'Magaceygu waa Bilal, fadlan ha iigu yeerina Billy'
Mallqabeen 100 Malyan oo gini hadiyad ahaan u siiyay jaamacad uu horay u dhigan jiray
Banii'aadanka waxaa uu ku dhisan yahay furfurnaanta dhinaca bulshada, haddii uu dareemo cidlo waxaa ku dhici kara welwel saameyn karaya caafimaadkiisa.
Xiriirka ka dhexeeya caafimaadka iyo furfurnaashaha bulshada ayaa ah mid saameyn ku leh nolosha qofka.
Image caption Astaanta isdhexgalka ee BBC-da
Dhabtii daraasadaha la sameeyay waxay muujinayaan in dadka furfuran iyo dadka xir xiran haddii uu la hadlo qof aysan gareyn ay si wanaagsan ula dhaqmayaan.
Si aad qofka u soo dhaweysid waa in aad salaantaa, dabeecadey rabaan hakuugu soo qaabilaane.
Image caption Dumar fadhiya goobta lagu nasto
Haddii aad mar kasta rumeysan tahay in la hadalka qof aadan aqoon aad dhibaato kala kulmi kartid, lagama yaabo in aad waligaa isku daydid oo aad iska bixisid firkraddaas, waxay arrintaas ku horseedeysaa in bulshada lagaa sooco ama lagu takooro.
Daraasaddan masoo jeedineyso in aad la hadashid qof kasta oo aad aragtid balse waa in aad la hadashaa qof kasta oo kusoo dhaweeya.
Waxay daraasaddan muujnineysaa in xiriirka labada qof ee aanan is aqoon uu horseedi karo farxad iyo xiriir wanaagsan.
Tallaabooyinka uu Sucuudiga qaadi karo haddii ay is khilaafaan Reer Galbeedka